ping ပြသာနာ အဖြေရှာ ကူညီကျပါ ခင်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
ping ပြသာနာ အဖြေရှာ ကူညီကျပါ ခင်ဗျာ
ကွှျန်တော် အကူအညီလာတောင်းပြန်ပါပြီခင်ဗျာ ဖြစ်နိူင်ရင် မြန်မြန်လေးကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီလိုပါ ကွှျန်တော် ဆိုင်က Bagan BroadBand သုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ကွှျန်တော်ဆိုင်က 10.x.x.x <== bagan က ဆိုင်အတွက်ပေးထားတဲ့ proxy ပေါ့ဗျာ
အဲဒီ proxy ကို တစ်ခြားဆိုင်ကနေလှမ်း ping ချင်ပါတယ် wi-max , mpt , adsl ဘယ်ဆိုင်ကပင်းပင်းပေါ့ဗျာ
ကွှျန်တော်ဆိုင်မှာ က LinkSyS router သုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ပြီးတော့ အဲဒီ ip ကိုလှမ်းpingလို့ရသွားပြီဘဲထားပါတော့ အဲဒီကနေမှာ
ကွှျန်တော်အမြဲသုံးတဲ နံပါတ်၅ စက်ကိုရောက်စေချင်ပါတယ် 192.168.0.5
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကွှျန်တော် အွန်လိုင်းဂိမ်းဆာဗာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲဆော့ချင်လို့ပါဗျာ ပြီးတော့ အိုင်အာစီ လိုကယ်ဆာဗာလေးတစ်ခုလည်းလုပ်ထားသေးတယ်ဗျာ့ အဲဒါဗျာဆိုင်ထဲတင်တော့အဆင်ပြေတယ် တစ်ခြားဆိုင်ကသူငယ်ချင်းတွေအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်
ကွှျန်တော်လိုက်မေးမြန်းကြည့်တော့လည်း router ထဲက firewall ကို disabe ပေးထားတဲ ပေးတယ်ဗျာ DMZ 19.168.0.5 enable ပေးတဲ့ ပေးတယ်ဗျာ ရပါဘူးခင်ဗျာ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး ကယ်ကြပါအုံးဗျာ အမြန်ဆုံးနော် ( ( (
Admin ကြီးတွေလုပ်ကျပါအုံးဗျိူ ့သိတဲ့လူတွေလည်း၀င်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းပေးကျပါအုံးဗျိူ ့ကလိချင်လှပြီဘယ်သူမှာ့လည်းဘာမှာ့မကူညီကျဘူး များပြီ များပြီ တော်တော်များနေပြီ :14:
router ထဲကို၀င်မယ်အဲဒီကမှာ 192.168.0.5 ကိုသွားမယ် ဂါးလုပ်ကျပါအုံးဆိုဆို
အစ်ကိုပြောတာ ကျွန်တော် တစ်ခု မှ မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ အစ်ကိုဘာကို ဆိုလို တာလဲ...။ နည်းနည်း လောက်သေချာလေးရှင်းပြပေးပါလား။ (ကျွန်တော် ဘဲ အ တာလားမသိ:p)
:d ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ် . . .ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘူး . . .:p အဲ့ဂလိုမျိုးတွေတော့ . .၀ါသနာသိပ်ပါတာပေါ့ဗျာ . . .အခုတော့ ဘယ်သူမှလည်း ပြန်မဖြေသေးတော့ . . ခဏစောင့်ပြီး . .ဘယ်သူတွေ ဘာပြောလဲ ပညာယူလိုက်အုန်းမယ် . . .:d
နားလယ်ဖူး နားလယ်သလောက်တော့ :39:အစ်ကိုက သူများဆိုင်က စက်ကိုလမ်းပြီး ping ဖို့က
remote desktop လုပ်သလိုကြီးလားဗျ ရလောက်ဘူးထင်တယ်ဗျာ ဥပမာ MPT server ကနေ bagan server ကို၀င်ပြီးမှ အစ်ကိုလိုချင်တဲ့ စက်နံပါတ် ၅ ကိုရောက်မှာ :O ထင်ဘူး:77:
ISP ကနေ VPN port အသုံးပြုခွင့် လျှောက်လိုက်ပါ။
အဲလောက်ထိလုပ်ချင်တာတော့ မလွယ်နိုင်ပါဘူးထင်တယ်။ အစ်ကို့ပုံစံက WAN အဆင့်ဖြစ်နေဘီ။ ဒီတော့က VPN ကို ISP ကနေလျှောက်လိုက်ပေါ့။ အင်း...out door unit တို့ indoor unit တို့တော့လိုလိမ့်မယ်.... နောက်တစ်ခုက ISP ကလည်း လွယ်လွယ်ချပေးလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ business ဖြစ်မှ လုပ်တာပိုကောင်းမယ်ဗျ။ cost က အရမ်းများလိမ့်မယ်။ ဒီ့အပြင် လစဉ်ပေးရမဲ့ cost တွေလည်း ပါလာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် တစ်ခုခု သုံးပြီး လုပ်ကြည့်ပါ့လား။ အန္တရာယ်တော့များလိမ့်မယ်ထင်ပါ့။ အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေ ဥပဒေနဲ့က မလွတ်လောက်ဘူးနော်....လုပ်ချင်ရင်လည်း တတိထားလုပ်။ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာတော့....တားတားကြောက်ကြောက်။ ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ် (အီးဘွတ်) တစ်အုပ် ထဲမှာ တွေ့ဖူးတာလေးပြောပြတာပါ...လက်တွေ့မလုပ်ကြည့်ရသေးပါ။ အဲဒါလေး အဆင်ပြေရင် ဘယ်လောက်ေ၀းေ၀း Net send 192.168.0.1 I miss you ဆိုပြီး ပို့ချင်သေးတယ်......:P
ဒီမှာ icmp ကိုပိတ်ထားတယ် ထင်တယ်။ ဘယ်ကို မှ ping လို့မရဘူး။ ဘာလို့ ping ချင်တာလဲ။ icmp က မပိတ်လို့လဲ မရဘူး။ မပိတ်ထားရင် ၀ိုင်း ping လိုက်မှ network traffic တွေတက်ကုန်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ wimax တွေအရင်က icmp ဖွင့်ထားတယ်။ gateway ကို လှမ်း ping ကြလို့ sector ကြီးခနခန ဒေါင်းနေတာ နဲ့ ပိတ်လိုက်ပြီ။
အွန်လိုင်း ဂိမ်း ဆာဗာက ဘာဂိမ်းလဲဗျ။ WOW လား။ စိတ်၀င်စားလို့။ ကျွန်တော် WOW private server လုပ်ချင်နေတာ။ Bandwidth မတတ်နိုင်လို့။ computer hardware ဖိုးလည်း မတတ်နိုင်တာပါတယ်။:D လုပ်ချင်သူများ နည်းပညာ အကူအညီပေးချင်ပါတယ်။ ပေးတော့ ဆော့နော်။:D hardware req: က player 3000 လောက်အတွက် cpu core2duo, mem 4~8 G, လောက်လိုပါတယ်။ hardware နိမ့်လေ player လျော့လေပေါ့။ member signup web page ရေးပြီးသား ပါရှိတယ်။
Team Viewer တင်လိုက်လေ ဗျာ ..